ကြိုးနှင့်တိပ်ခွေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်ပတ်တီးနှင့်တိပ်စက်
ခွါ Casting တိပ်
Hoof Casting တိပ်သည်မြင်းခွါပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်တိကျသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်းသည်ခွေးပုံသဏ္ဌာန်အရိုးတုများနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောဗဓေလသစ်ပါဝင်မှုရှိသည်။ မြင့်မားသောသတ္တုပုံသဏ္ဌာန်တိပ်သည်သတ္တုခွံ၏သတ္တုပုံသဏ္theာန်ကိုခွာသို့လွယ်ကူစွာပျော့ပြောင်းနိုင်သည်။
Crepe elastic ပတ်တီးသည်ပျော့ပျောင်းသောဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားသော elasticity နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးခြေလက်အင်္ဂါရောင်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
၁။ ပစ္စည်း - ၈၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၀% spandex
2. အလေးချိန်: g / ㎡: 60g, 65g, 75g, 80g, 85g, 90g, 105g
၃။ ကလစ် - ကလစ်များနှင့်အတူ၊ သို့မဟုတ်သံတူများ၊ elastic band clips သို့မဟုတ် metal band clips နှင့်အတူ
4. အရွယ်အစား: အရှည် (ဆန့်):4မီတာ, 4.5m, 5m
5. အကျယ်: 5m, 7.5m 10m, 15m, 20m
6. Blastic ထုပ်ပိုး: တစ် ဦး ချင်းစီ cellophane အတွက်ထုပ်ပိုး
၇။ မှတ်ချက်။ သုံးစွဲသူ၏တောင်းဆိုချက်အတိုင်းကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်များ
tubular elastic ပတ်တများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဘက်စုံသုံးခြင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့်လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အလွန်နီးကပ်နိုင်သည်။
•ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာကိုသုံးပါ။ ပိုလီမာသောပတ်တီးအကာရှတွင်ပုံသေ၊ ဂျစ်စတမ်ပတ်တီး၊ အရန်ပတ်တီး၊
•ပျော့ပျောင်းသော texture, အဆင်ပြေ, သင့်လျော်သော။ မြင့်မားသောအပူချိန်ပိုးသတ်ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမပုံပျက်သော
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်း၊ လှပပြီးမျိုးရိုးလိုက်ခြင်းသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုမထိခိုက်စေပါ။
ရေစိုခံ Pad သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောရေစိုခံနိုင်မှု၊ elasticity နှင့်အသားအရေခံစားမှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ သင်သည်စိတ်ချရသောရေချိုးခြင်းကိုထားပါ။
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ရေစိုခံပျော့ပျောင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း
လျှောက်လွှာ: အရိုးအထူးကု, ခွဲစိတ်ကုသ
ဖော်ပြချက် - ရေစိုခံအခင်းသည်အင်္ဂတေ / သွန်းခြင်းပတ်တီးများခိုင်မာလာသောအခါလူနာ၏အရေပြားပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်အင်္ဂတေကြိုးစည်း / ချပ်ပြားတိပ်၏အရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေစိုခံ Pad သည်ဆေးကြောခြင်းနှင့်တွဲစပ်ပြီးလူနာများ၏အသားအရေကိုစိုပြေစေခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရှူရှိုက်နိုင်သော၊
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊
ဖော်ပြချက် - ရေစိုခံအခင်းသည်အင်္ဂတေ / သွန်းခြင်းပတ်တီးများခိုင်မာလာသောအခါလူနာ၏အရေပြားပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်အင်္ဂတေကြိုးစည်း / ချပ်ပြားတစ်ချောင်း၏အရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Orthopedic Casting တိပ်သည်အရည်ပျော်ပစ္စည်းမရှိပါ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသည်၊ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးလျင်မြန်စွာကုသနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောပုံဖော်စွမ်းဆောင်ရည်၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ မာကျောခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာသန့်ရှင်းမှုရှိခြင်း။ X-Ray ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်နှင့်ပတ်တီးကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုဘဲအရိုးကုသမှုကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်ပြေသည်၊ သို့မဟုတ်အင်္ဂတေမှဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။
Self adhesive ပတ်တီးကိုပြင်ပမှချည်နှောင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ့ရှိသောအားကစားသမားများလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုလက်ကောက်ဝတ်၊ ခြေထောက်နှင့်အခြားနေရာများတွင်ပတ်။ ခြုံ။ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
•အလှဆင်ခြင်း - ၎င်းကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုခြင်း၊ တောက်ပသောအရောင်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကမျှတသောအလှဆင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Plaster Bandage သည်ပျော့ဖတ်တက်သည့်ပိတ်ကျဲစတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ရေမှုန်ရေမွှားပြီးနောက်ဒီဇိုင်းကိုအပြီးသတ်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ အလွန်အားကောင်းသောမော်ဒယ်လ်စွမ်းရည်ရှိခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုကိုကောင်းမွန်စေသည်။ အရိုးအထူးကုသို့မဟုတ်အရိုးအထူးကုခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ခြေလက်အတုများအတွက်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊